Maalinta: Abriil 3, 2018
Baska hawada ayaa laga joogaa magaalada Adana
Dawladda Hoose ee Magaaladda Caasimadda waxay dayactir balaadhan ka sameysay joogsiga kamaradaha amniga ee qoraxda u rogay qabow qabow kuleylka xagaaga. Dawlada Hoose ee Magaaladda Caabudwaaq waxay dib u cusbooneysiisay joogsiyada qaboojinta ee ku yaal iskuullada halkaas oo lagu adeego adeegyada gaadiidka dadweynaha. Imaatinka basaska dawlada hoose [More ...]
Weerarka tareenka wuxuu bilaabmay Faransiiska
Shaqo joojinta shaqaalaha tareenka xNUMX-bil ee Paris ayaa bilaabatay maanta. safaf dhaadheer ayaa ka dhacay xarumaha metrooga iyo tareenka, tiro xaddidan oo tareenno ah oo ku socdaalaya curyaanka. Xilliga shaqo joojinta ayaa ka bilaabatay Faransiiska. [More ...]
Shaqada dhismaha ee dhismaha Tareenka Baaskiilka Cusub ee Bursa
Kaabayaasha Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa-Osmaneli, Dhismaha Superstructure iyo Natiijada Tender Result Result Bursa-Osmaneli waxay leedahay xad xadidan oo ah 2018 / 41899 GCC lambarisay 3.198.743.127,77 TL iyo qiyaasta qiimaha 2.455.245.031,31 TL ee Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga. [More ...]
1 TL looma hayo tikidh kasta oo ku taal garoonkii la siiyey ee Alansispor
Alanyaspor'a '1 TL oo tigidhada gawaarida gawaarida' oo dhan baa ku sii jira hawada. 300 TL kooxda cagaarka cagaarka, inkasta oo in kabadan kun rakaab ah 1 rakaab ah lagu xareeyay Alanya Teleferik, kaas oo la galiyay intii lagu gudajiray Ciidul Adxaa. [More ...]
1915 Baasaboor aan lahayn furitaan
Guddoomiyaha Golaha Dhexe ee CHP Ali Uyanık, Guddoomiyaha Golaha Dhexe ee AKP Gultekin Yildiz 'Dawladda Hoose ee Green iyo Dhismaha Xarunta Dhaqanka' ayaa kaga jawaabay ereyada. Yıldız wuxuu ka baxay hoolka magaalada oo ka jawaabey su'aalaheenna. [More ...]
RayHaber 03.04.2018 Warbixinta Shirka
Xakamaynta iyo Dayactirka Jiirarka Mashiinka Dukaan ee u Dhaxeeya Ankara iyo Eskişehir Bearing iyo Bearing Inner Ring ayaa la iibsan doonaa (TÜDEMSAŞ) Bogie Dhexdhexaad Dhexdeeda Waxaa Lagu Iibsan doonaa [More ...]
Duqa Magaalada Yılmaz: MALI Waa inaan kordhinno dhoofinta Samsun Madaxkan
Duqa degmada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz ayaa yidhi, “Si dhaqaalaha Samsun u kobocdo, sicirka dhoofinta waa in la kordhiyaa. Waxaan si adag ugu shaqeyneynaa tan. Duqa magaalada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz, warshadaha Samsun [More ...]
TCDD 3. Bandhigga Hiddaha iyo Hiddaha Hiddaha ee Horyaalka ayaa bilowday Gobalka
TCDD 3. Tartan ciyaareedkii hore ee kubada cagta ee ay soo qabanqaabiyeen Agaasime Goboleedku wuxuu ku bilaabmay 02.04.2018. Halka Halka [More ...]
3. Madaarka ayaa sii deyn kara shaqo la'aanta
Guuritaanka garoonka diyaaradaha Ataturk wuxuu ka tagi karaa boqolaal dad ah oo shaqo la'aan ah. Sani Sener, shaqaaluhu waxay la kulmeen maamulka IGA si ay u sii wadaan shaqo la’aanta. Garoomada tav Holding CEO Sani Sener, isreebreebka si lacagta ay u Turkey socda [More ...]
Halkalı- Baarisyada Tareenka ee Gudaha Ku-meel-gaadhka ah ee Baarlamaanka
Xiritaanka isdhexgalka ee Istanbul YHT Ankara, Halkalı- Inkastoo dhammaadka shaqada ee tareenka ee tareenka xaafadda tareenka, waddada tijaabada ee tareenada ayaa bilaabmay. Sirkeci-Halkalı iyo Söğütlüçeşme-Gebze Khadadka Magaalada, İstanbul Ankara [More ...]
Gawaarida Tünektepe ee ay maamusho Dowladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya lama isticmaali doono illaa Abriil sababo la xiriira howlaha dayactirka awgeed. Antalya Metropolitan Municipal 20 milyan 14 kun oo ginni qarash ah, sideed qof 695 cabin 36 mitir [More ...]